Rubatsiro ruri PaNzira | MINYENGETERO MARI
musha Urongwa hwekuverenga Bhaibheri Rubatsiro ruri PaNzira
Mako 10: 46-52
Mune yanhasi Mangwanani kuzvipira tinenge takatarisa kuna Mwari mubatsiri wedu. Wakambonzwa kushaya zvekuita ndokubvuma kuti hauna chaunobatsira here? Kwete, hausi! Mwari ndiye Mubatsiri wako. Wakanganwa here rairo yaJesu yekuti “kumbira uye uchapihwa, tsvaga uye uchawana, gogodza uye uchazarurirwa” (Mat. 7: 7 Mat. 21:22 & Joh. 14:14)
Munyori wePisarema akanzwisisa izvi. Paainzwa kushaiwa kukuru, akachema "Ndakasimudza meso angu kumakomo, RUBATSIRO RWANGU runobva kupi, rubatsiro rwangu runobva kunaShe, wakaita kudenga napasi" (Mapisarema 121: 1-2). Kana iwe wakagamuchira Mweya Mutsvene, zvikomo zvaMwari hazvicharambidzirwe kuchechi yako kana imwe nzvimbo yekusangana naMwari. Chero bedzi iwe uchinamata Mwari mumweya uye muchokwadi, unogona kudana kwaari chero kupi nguva chero nguva.
Asi, dzimwe nguva tinoisa pfungwa dzako pamunhu kana nzvimbo, kunyangwe mushure mekukumbira Mwari rubatsiro nekuti tine chokwadi chekuti Mwari achavashandisa kupindura minamato.
Rubatsiro runobva kuvarume rusina kurongeka naMwari runogona kuunza kupfupika kwenguva pfupi uye kuzvidemba kusingaperi, asi rubatsiro rwakafuridzirwa naMwari kuburikidza nevarume ruchapa mhinduro isingaperi uye mufaro usingagumi.
Mwari ega ndiye Musiki wezvose. Anogona kushandisa chero munhu uye chero chinhu kuti akubatsire. Iwe unoda rubatsiro nezve chero nyaya?
Bvuma Mwari, kwete zvisikwa zvake, sosi yekubatsira kwako. Zvino simudza meso ako kwaAri nerutendo, tariro, tarisiro huru, chishuwo uye chivimbo. Hauzombo nyadziswa.
1.Mubatsiri wechiitiko changu, Jesu Kristu, simuka, nditumire rubatsiro kubva kunzvimbo yako Tsvene nezita raJesu
2. Vabatsiri vangu vehumwari kubva pamakona mana epasi, vanopisa izwi raIshe, ndiwane nemoto, muzita raJesu
3. Shoko rega rega rakaipa rinotaurwa kutaundi rekumusha kwangu vachipesana nekwavo, kumashure kwemoto, nezita raJesu
4. Munyu wehupenyu hwangu haungazove jecha, muzita raJesu
5. Simba rese ranga richindikandira kusvika kune chimiro chekudzokera kumashure, ndinokuviga uri mupenyu, muzita raJesu
6. Chero munhu akazvarwa nemukadzi, achitaura mashoko akashata uye kutaura kwandiri kuenda, kutinhira kwaMwari, vabvambura-bvarura, muzita raJesu.
7. Chero murume kana mukadzi, akagara pamubhedha uye achinamata minamato yakaipa pamusoro pekusimuka kwangu, Baba vangu, bvisa jecha pamakumbo avo, muzita raJesu.
8. Ndatenda Jesu neminamato yakapindurwa
Isaya 49: 10
Previous nyayaKuzvipira Kwemangwanani
inoteveraNamata Uko Rudzi rweGhana
100 Munamato wekudzivirirwa kubva kuChitema Mashura Uye Uroyi Masimba